Degmada waxaa ku yaalo guriyaal badan iyo jardiimo ku yaalo dabiica qurxoon. Dadka xaafadaha dagan badankood waxeey dagan yihiin filooyin iyo guriyaal ku yaalo dabaq. Shirkada degmada ee giryaasha AB Uppvidingehus ayaa leh hadana maamusho ku dhawaad 800 oo guri. Sido kale waxaa dhowr guri kireeyaal gaar ah.
Waqtiga hada taagan waa adkaan kartaa in la helo guri la kireeysto. Guriyaasha anfacada-guud waxaa inta badan loo qeeybiyaa dadka ugu baahida weeyn.
Koox-luqadeedka degmada waxuu ku xiran yahay usoo iyo ka guurida. Dadka ugu badan oo degan meesha waxeey ku hadlaan iswiidhish iyo ingriis. Hada koox-luqadeedka ugu weeyn waa af carabi iyo af soomaali. Kuwaas ma ahane waxaa sii jiro afka dari, afka iraan, af tigrinya, afka ruushka, afka booland, afka hungari iyo af jarmal.
Haddii aad hami uu heeyso in ku toobarato ku hadalka iswiidhishka ku soo dhawaaw biibitada-luuqada ee kaniisada Iswiidhan oo ku taalo Åseda guriyaashe ururada diimadeed.
Degmada diiwaankeeda-urureed waxaad ka raadin kartaa ururka aad adiga hami uu heeyso. Waxaa jiro ku dhawaad 220 ururo oo kala duwan oo arimaha ee ka hoowl galaan waxa ka mid ah waxbarashada, dhaqanka, heesaha, dabiicada iyo isboortiga-gaadiidka.
Ururka Somaalida waxu ku yaala Åseda, urur carbeedna waxuu ka furmooyaa degmada. Xaafado badan ayaa lagu qabtaa hoowlo kaniisadeed ee kala duwan. Mida Uppvidinge uu gaarka ah waa in ee jiraan ururo isboorti oo badan ee ka xooga saaro caruur iyo dhalinyaro. Ururo isboorti oo badan waxeey xooga sii dheeraad ah uu saaraan jinyeed-duwaanshaha iyo isdhexgalka.
Degmada waxaa ku taalo dhowr maktabado oo hayo buugag badan oo loogu tala galay da’ kasto. Matkabada degmada waxaad ka akhrisan kartaa oo kale wargeeyska-maalmeedka, waxaad ka deeysan kartaa wargeeysyada iyo cajaladaha-buugaaga. Waxaad ka soo kireeysan kartaa filimin, waxaad si bilaash ahna uga raadin kartaa warbixin ku jirto internetka. Si aad maktabada waxu uga amaahato waxaad uu baahan tahay kaarka-amaahsiga oo aad halkaas bilaash uga heleeysid.
Degmada oo dhan waxeey lee dahay goobo kulan oo leh dukaamo gacaan labaad iibiyo. Dukaamada gacan labaadka iibiyo waxaad ka heleeysaa wax kasto laga bilaa dhar iyo maacun ilaa alaab guri oo rakhiis ah. Lions loppmarknad waxuu ku yaala Lenhovda iyo Åseda iyo Älghult waxaad ka heleeysaa Kupan Röda Korset. Åkvarn-Björkhå waxaad ka heleysaa Emmaus.
Xafiiska maamulka bulshada iyo xafiiska shaqada waxeey ku wada yaalaan isla hal sar oo ku taalo Storgatan 29 gudaha Lenhovda.
Lenhovda waxaad ka heleeysaa qeeybta-taabo galinta oo soo dhaweeyso da’ yarta kaligood timaado, dhalinyaro iyo dadka kale oo dalka ku cusub iyo qooysyo. Halkaas waxaa ka shaqeeyo mashruc-wade, labo gacanyare-bulsho iyo hal jiheeye-qaxooti oo carabi ku hadlo. Isbuuc kasto qeeybta-taabo gelinta waxeey joogaan oo kale Alstermo.
Degmada Uppvidinge waxaa ku taalo sagaal dugsiyaal xanaano ee degmadeed iyo sadax dugsiyaal xanaano oo gaar ah. Dugsiga xnaanda waa hoowl waxbarho kooxeed oo loogu tala gala ycaruurta uu dahxeeyo 1-5 sano. Dugsiyada xnaanada waxeey sida guud furan yihiin sanadka oo dhan, inta badana maalinta ayadoo uu habeeysan xilliga shaqada waalidka ee ku jirto mudada-safarka ama baahida canuga.
Degmada Uppvidinge waxeey lee dahay shan dugsiyaal hoose iyo hal dugsi sare. Sido kale waxa jiro guri-xilli firaaqo oo ku jiheeysan caruurta iskuulka ee uu dhaxeeyo 6 iyo 13 sano. Bogga degmada ayaad ka akhrisan kartaa in dheeraad ah oo ku saabsan iskuulada iyo guriyada xilliga firaaqada ee kala duwan.
Uppvidinge waxaad ka heleeysa rugta caafimadka oo ku taalo sadax xaafad oo qaabilo karto qofka heeysto sharci daganaansho. Rugta caadimaadka Lenhovda iyo Åseda waxaa kala wado maamulka gobolka caafimaadka. Åse waxaad ka heleeysaa Specialistläkargruppen, Alstermo waxaa ku taalo xarunta-caafimaadka Falken. Ruggaga caafimaadka dhamaantod waxeey lee yihiin qeeyb caruured.
Markii aad xariir la yeelaneeyso degmada ama hey’ad dowladeed waxuu qofka aan iswiiidhishka afkiisa hooyo uu san aheeyn, heli karaa turjuman haddii uu arko in aan laga maarmin. Maanta caawinaada-turjumaanka waxaa lagu soo bandhigaa luuqado badan. Turjumaanada waxaa adeegsanaayo xafiiska-turjumaanada, dabcana waxeey lee yihiin sir-xafidid. Caawimaada turjumanka waxaa laga heli karaa oo kale xafiiska shaqada jiheeyaashiisa haddii la lee yahay qorsho-taabo galin, hadana degmada qeeybtaada taabo gelinta waxeey heysataa hal jiheeye-qaxooti oo ku hadlo cari oo fasiraada qofka ka caawin karo.
Haddii aad uu baahan tahay xariir shirkadeed ama goob-warshadeed la xariir degmada qeeybtaada hormarinta jawiga shirkada. Asaga ayaa ka caawinaayo in aad xariir la yeelato qof sax ah oo ku jiro maamulka degmada, kuuna sii gudbinaayo hey’addaha dowlada ama hey’addaha kale. Haddii aad hami uu heeyso in shirkad furatid waxaad si kala uu jeedsan kartaa Nyföretagscentrum oo xafiis ku leh Åseda ama ALMI oo ku siineeyso talobixin bilaash ah.
In ka mid ah shaqo dhiibayaasha weeyn ee degmada waa Profilgruppen, GEFAB, Elitfönster iyo Degmada Uppvidinge.
Älghults Friskola söker grundskollärare Lärare i grundskolan, årskurs 4-6
Vi söker fler säljare i Åseda Utesäljare
Lagermedarbetare till 3 Step ITs logistikanläggning i Klavreström Lagerarbetare
Klasslärare eller utbildad förskollärare sökes till Uppvidinge Lärare i förskola/Förskollärare
Industrivana medarbetare till Alstermo Maskinoperatör, mekanisk verkstad
Profilgruppen - Säljtekniker Utesäljare
CNC - operatör till expansivt företag i Uppvidinge CNC-operatör/FMS-operatör
Textillärare Lenhovda / Nottebäck - skolan Lärare i grundskolan, årskurs 4-6
Personlig assistent sökes till 11 - årig kille i Lenhovda Personlig assistent
Ridinstruktörer / stallpersonal till Uppvidinge Ridinstruktör/Ridlärare
Vårdare med jour gruppbostad Vårdare/Arbetshandledare/Boendestödjare
CNC - svarvare sökes till Gunnebo Industrier! CNC-operatör/FMS-operatör
Specialpedagog till Öppna förskolan Specialpedagog
Vård - och omsorgschef Äldreomsorgschef
Transportplanerare till ProfilGruppen i Åseda Transportplanerare
Service Technician Åseda - 180001YL Vindkraftstekniker
Uthålliga och fysiskt starka produktionsmedarbetare Montör, metallprodukter
Terminalarbetare , Växjö Postterminalarbetare
1 178 km2
Vetlanda 40 km
Göteborg 268 km
Malmö 290 km
Stockholm 375 km